Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Kiiskii Hawaii Omicron Hadda Waa La Helay
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • HITA • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Shakhsi ku sugan Hawaii oo hore u lahaa COVID-19 ayaa tijaabiyey togan kala duwanaanshaha Omicron. Shakhsigaan waligiis lama talaalin mana lahan taariikh socdaal.
Waaxda Shaybaadhka Gobolka (SLD) ee Waaxda Caafimaadka ee Hawai'i (DOH) waxay xaqiijinaysaa kala duwanaanshaha SARS-CoV-2 B.1.1.529, oo sidoo kale loo yaqaanno kala duwanaanshaha Omicron, laga helay jasiiradaha.
"Tani maaha sabab argagax leh, laakiin waa sabab walaac. Waa xasuusin in masiibadani socoto. Waxaan u baahanahay inaan iska ilaalino nafteena anagoo is tallaalayna, xiraneyno maaskaro, ka fogaana inta ugu macquulsan oo aan iska ilaalino dad badan," ayay tiri agaasimaha caafimaadka Dr. Elizabeth Char, FACEP.
Maalintii isniinta Adeegyada Shaybaarka Cilad-sheegashada, Inc. Qaybta Shaybaadhka Dawladdu waxay samaysay isku xigxig dhan genome-ga oo la dedejiyey maantana waxay go'aamiyeen muunadda kala duwanaanshaha Omicron.
Shakhsiga togan ee COVID-19 waa degane O'ahu oo leh calaamado dhexdhexaad ah oo hore ugu dhacay COVID-19, laakiin waligiis lama tallaalin.
Tani waa xaalad ku fiday bulshada. Shakhsigu ma laha taariikh socdaal.
Kala duwanaanshaha Omicron ayaa laga helay ugu yaraan 23 waddan iyo ugu yaraan laba gobol oo kale.
“Intii uu cudurku faafay, shaybaadhka gobolka ee DOH wuxuu hormuud u ahaa samaynta isku xigxiga COVID-19, kaas oo ah sida loo aqoonsaday kala duwanaanshaha Omicron. Nidaamka ilaalintayadu waa shaqaynayaa. Ku dhawaaqistani waxay u adeegtaa xasuusin ah inaan aad uga taxadarno inaan ilaalino nafteena iyo kuwa aan jecelnahay, gaar ahaan inta lagu jiro xilliga fasaxa," ayay tiri Dr. Sarah Kemble oo ku takhasustay cudurrada faafa.
"Adeegyada Shaybaarka ogaanshaha, Inc. (DLS) waxay si dhow ula shaqeysay Waaxda Caafimaadka tan iyo bilowgii masiibada," ayuu yiri Dr. Chris Whelen, Madaxweyne Ku-Xigeenka iyo Agaasimaha Farsamada ee Microbiology iyo Diagnostics Molecular. "Markii aan ogaanay in hiddo-wadaha soo baxaya, taas oo ah tilmaan molecular ah oo ah in fayrasku uu noqon karo kala duwanaanshaha omicron, isla markiiba waxaan u sheegnay Shaybaadhka Gobolka DOH waxaana u dirnay muunadda si ay isugu xigaan."
Qof kasta oo uu la soo xiriiro baadhaha kiis ka socda DOH waxaa laga codsanayaa inuu fadlan la shaqeeyo dadaalka lagu yareynayo gudbinta COVID-19. Qofkasta oo leh calaamadaha waxaa laga codsanayaa in la iska baaro oo laga fogaado dadka kale. Dadka aan la tallaalin ee xiriir dhow la leh dadka qaba COVID-19 waxaa lagula talinayaa inay is-baaraan.
Macluumaadka ku saabsan baaritaanka bilaashka ah iyo tallaalada waa laga heli karaa halkan.